राजकुमार दिक्पाल ~~
पत्रपत्रिकाका पानामा आफ्नो नाम छाप्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला ! रेडियोमा आफ्नो नाम गुञ्जाउन पाए, झन कस्तो हुन्थ्यो होला ! मेरो मनमा उर्लिरहेको थियो, यस्तो असामान्य तिर्खा ।
कसरी मेट्ने होला यो तिर्खा ? छटपटी लाग्थ्यो । तिर्खा मेट्न खोलासम्म धाउनका लागिबाटो देखाउने पनि कोही छैनन् । पत्रपत्रिकामा छापिएका अक्षरहरुमध्ये आफ्नो नामसँग मिल्ने ब्यञ्जनवर्ण र स्वरवर्णका अक्षरहरु ब्लेडले काट्थेँ र एउटा कागजमा टास्थेँ । त्यसलाई हेरेरै घण्टौ सोच्थेँ, आहा, यसरी नै मेरो नाम कुनै पत्रपत्रिकाको पानामा छापिएको दिन कस्तो हुन्छ होला !
पत्रपत्रिकाको पानामा नाम छाप्न त, खल्तीमा दाम पनि हुनुपर्छ । त्योबेला पत्रपत्रिकासम्म पुग्ने सहज माध्यम हुलाक सेवा विभाग थियो । कागज, कलम र त्यसमा शब्दहरु भर्ने सीप आफूसँग भएर मात्र भएन, आफ्ना भावहरु कोरिएका कागजलाई सुरक्षित गर्न खाम किन्न पर्यो, र त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन हुलाक टिकट पनि किन्न पर्यो । त्यसैले नामको लागि दाम पनि चाहिने भयो । त्यसो तपत्रपत्रिका पनि आफ्नो हातमा निशुल्क आउने कहाँ हो र?
म त्यो बेला चलचित्रप्रधान “कामना” मासिकको नियमित पाठक थिएँ ।
बजारमा “कामना” को नयाँ अङ्क आयो । त्यो किन्ने ८ रुपैयाँ दाम आफूसँग छैन । पर्यो फसाद ।
ठूलो छटपटीमा परेँ म । के गर्ने, कसो गर्ने ? एसएलसी दिएर बसेको समय थियो त्यो ।
म कक्षा १ देखि ३ सम्म पढेको विद्यालय भवन २०४५ सालको भूकम्पका कारण भत्किएको थियो । त्यसको पूननिर्माण हुँदै थियो । कुनै समय त्यहीँ विद्यालय भवनमा पढेर कक्षाको उत्कृष्ट विद्यार्थी दरिएको म त्यहीँ गएर काम मागेँ । एक साता मजदुरी गरेँ । पैसा बुझेँ, सरासर गएर “कामना” मासिक किनेँ । अब मसँग पत्रिका खरिदपछि बचेको प्रशस्त रकम थियो, खाम र हुलाक टिक किन्नलाई ।
यसरी पसिना चुहाएर कमाएको दामबाट मैले एउटा नाम पनि पाएँ । विजयकुमार पाण्डेको फोटो कभरमा छापिएको त्यो “कामना”को (सायद २०४६ भदौ)मा मेरो पाठक प्रतिक्रिया छापियो । खुसीले धेरै रातको मेरो निद्रा विथोलियो ।
कलमले केही लेख्नु परे, सकेसम्म धर्साहरु नभएको कागजमा लेख्न मन लाग्छ, मलाई। सजिलोको लागि सम्झनुहोस, फोटोकपि पेपर । मलाई लाग्छ, म धर्साहरु अर्थात्, कसैको बन्धनमा रहन मन पराउदिनँ । धर्साहरु नभएको कागज भए पनि मेरा अक्षरका हरफहरु बक्र हुँदैनन् । सायद म एउटा सिधासोझा मानिस हुँ । लेख्नु पर्दा म सेतो कागजमा कालो मसीले लेख्न मन पराउँछु । सायद सप्तरङ्गी इन्द्रधनुषी स्वभाव छैन, मसँग । अर्थात् म,“ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट” खालको मान्छे हुँ । सकेसम्म कम ढाँट्छु ।
त्यसैले त, मैले मजदुरी गरेको प्रसङ्ग माथि उल्लेख गरेँ, नढाँटिकनै ।कम ढाँट्दा मैले ब्यक्तिगत रुपमा केही घाटाहरु ब्यहोरेको पनि छु । यसमा मलाई कुनै पछुतो छैन, न छ मसँग कुनै हीनतावोध ।
कुनै पनि बन्धन मेरा लागि सुपाच्य नभए पनि, जिविका चलाउन कसैको स्वामित्व वा नेतृत्वमा रहेको संस्थामा आत्मअनुशासित भएर पसिना बेच्न जानु त छँदै थियो । लाग्यो, जिविकाका लागि पत्रकार वा प्राध्यापक भइयो भने स्वतन्त्र रुपमा जीवन बिताउन सकिन्छ । मैले दुवै अभ्यास गरेँ, २२ वर्ष पत्रकारिता गरेँ, अनि ८ वर्ष कलेज पढाएँ । (यी दुवै पेशामा लाग्दा कति स्वतन्त्र भइने रहेछ भन्ने अनुभूति कुनै समय लेखौँला ।)
अन्ततःमैले लिएको पेशागत लक्ष्य पुरा गरेरै छोडेँ ।
धनकुटा, मेरो जन्मभूमी । त्यहीँ ठाउँको समाचार सम्प्रेषण गर्दै म पत्रकारितामा होमिएँ । तर यो अभ्यासमा मैले कसैलाई गुरु थापिनँ । त्यसमा गुरु थाप्न योग्य मानिस नपाएर पनि हुनसक्छ वा मेरो आफ्नै स्वभाव पनि यसमा जिम्मेवार हुनसक्छ ।
केही साप्ताहिक अखबारहरुमा सानोतिनो समाचार छापिन थाले मेरो बाइलाइनसहित । तर मलाई अलि ठूलो स्पेश चाहिएको थियो । सायद ममा पत्रकारिताको रहर मात्र होइन, पेशागत इच्छाशक्तिको ऊर्जा पनि बढिरहेको थियो ।
त्यो बेला म जिल्ला विकास समिति, धनकुटामा करार सेवामा जागिर पाएको थिएँ । प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको “कृपा”बाट धनकुटा सदरमुकाममा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु धमाधम उनकै गृहनगर विराटनगर सार्न थालियो । अनि भयो, धनकुटा बेहुली अन्माएर पठाएको आगनजस्तै ।
पछि सञ्चयकोषको एउटा सामान्य शाखा धनकुटामा दिइयो, गिरिजाबाबुको अर्का “कृपा”बाट । त्यो कार्यालय पनि बडो तामझामका साथ धनकुटालाई “उपहार” प्रदत्त गरियो । उपहार बोकेर आइपुगे, तत्कालिन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य ।
सञ्चयकोष कार्यालयको उद्घाटन र धनकुटा सदरमुकामको तत्कालिन अवस्थाबारे केही लेखेर “कान्तिपुर” दैनिकमा पठाएँ, हुलाकबाट । छापिए छापियोस, नछापिए नछापियोस । त्यो अखबारले मलाई भब्य स्थान दिइहाल्यो । तेस्रो पृष्ठको मुख्य समाचार भएर त्यो छापिएपछि गम्भीर बनेँ म । लाग्यो, मेरो पत्रकारिताको पेशागत सुरुआत भयो अब । दुई महिना जति भएको थियो, जिल्ला विकास समिति, धनकुटामा जागिर सुरु गरेको । त्यसपछि त त्यो जागि छाडि पनि हालेँ ।
मलाई पत्रकारिताका लागि उत्प्रेरित गर्ने चाहिँ अग्रज नेता तत्कालिन जिविस सभापति धर्मराज पौड्याल हुनुहुन्छ । तर सिकाउने कोही थिएनन् । यद्यपी म अखबारको प्रत्येक अक्षर र शब्दहरुलाई चामल केलाएझैँ केलाउथेँ । सम्पादित भएर आएका समाचारहरुको गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्थेँ। त्यहीँ अध्ययनको सिकाइलाई प्रयोगमा ढाल्थेँ । अनि समाचार सङ्कलन र लेखनमा जुट्थेँ । “कान्तिपुर”मा ती समाचार छापिएर आउँथे । २०५०को असारमा “कान्तिपुर”ले काठमाडौंमा जिल्ला समाचारदाताहरुको भेला बोलायो । त्यहाँ अग्रजहरुले भने, “तिमी फिचर राम्रो लेख्छौ ।”मैले जवाफमा यति मात्र भनेँ,“हजुर, हजुर !”
पहिलोपटक “फिचर” शब्द सुनेको थिएँ । फिचर भनेको चाहिँ के हो, थाहापत्तो छैन । त्यो शब्द फिचर शब्द सुनेको डेढ वर्षपछि धरानमा मैले आधारभूत पत्रकारिता तालिम लिएँ । त्यतिखेर पो प्रशिक्षक गोकुल पोखरेलहरुले बताएपछि“फिचर”बारे बुझेँ । नबुझिकनै लेखिएछ, हार्ड न्यूज, सफ्ट न्यूज अनि फिचर । हा...हा...हा...!
मेरो पेशागत इच्छाशक्ति र त्यसले ममा भरेको ऊर्जाका कारण अक्षरहरुमा दौडने मेरा आँखा र आँखा हुँदै मष्तिष्कमा पुगेका भावहरु मेरा गुरु रहेछन् ।
एकलब्य अभ्यासबाट सुरु भएको मेरो संस्थागत पत्रकारिता जीवनले २२ वर्षपछि विश्राम लिएको छ । अहिले म स्वतन्त्र लेखनमा छु ।
आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेको मान्छेको गुरु नै छैनन् र ?मैले स्नातकोत्तर गर्दा मलाई रामकृष्ण रेग्मी, श्रीरामसिंह बस्नेत, डा. कुन्दन अर्याल र डा. सुरेश आचार्यहरुले पढाउनुभयो । पत्रकारिता शिक्षाको उहाँहरु गुरु हुनुहुन्छ, तर पत्रकारिता अभ्यासमा चाहिँ म “एकलब्य” नै हुँ । सुरुआती पत्रकारितामा यात्रामा म एक्लो थिएँ । पछिसहयात्रीहरु बटुलेँ ।
बसको छतमा जो भेटिए
२०५१ सालको मध्यावधि चुनावको समय थियो । त्यो बेला म धरानमा थिएँ । उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी दर्तासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न जानुपर्ने भयो, इनरुवा । एमाले उम्मेदवरा लिला श्रेष्ठ सुब्बालाई साथ दिने कार्यकर्ता चढेको बसको छतमा चढेँ, मित्र जीवन भट्टराईका साथ । बसको छतमा जीवनजीले एक जना युवकलाई कोट्याएर भन्नुभयो,“ल, तिमीलाई काम लाग्ने मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँको नाम हो राजकुमार दिक्पाल ।”
ती नवयुवकले मलाई एकछिन मलाई छक्क परेर हेरे । अनि जम्ला हात गरे,“नमस्कार दाई ।” पछि ती भाई मकहाँ धाउन थाले । सोचेँ, यी भाईलाई म आफूजस्तै बनाउँछु । तर बीचमा आउन छाडे ।अहिलेजस्तो सहज सञ्चार साधन थिएन । कुनै बेला आउँथे, तर अलि निराश थिए देखिन्थे । पछि बुझियो, उनी त्यसबेला असफल प्रेमका कारण तनावमा रहेछन् ।
विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कदै गए ती भाई । उनलाई मैले काठमाडौंबाट निस्कने एउटा साप्ताहिक अखबारका लागि सिफारिस गरिदिएँ । उनको बाइलाइनमा धमाधम समाचार छापिन थाल्यो । उज्यालै अनुहारका ती भाईको अनुहारमा त्यो अखबार आउने दिन थप उज्यालो भरिन्थ्यो । उनको अनुहारको उज्यालो मेरो अनुहारमा पनि ठोकिन्थ्यो । आहा, कस्तो मज्जा !
छापापत्रकारिताबाट करिअर सुरु गरेका ती भाई पछि रेडियोतिर अग्रसर भए । उनैको अग्रसरतामा धरानमा एक एफएम स्थापना भयो । अहिले पनि त्यो एफएम बजिरहेकै छ । म आफू श्रमजिवीका श्रमजिवी,उनी त मालिक पत्रकार पो भए । उनी अर्थात् जसकुमार राई ।